Soomaaliya: doon daroogo waday oo la baarayo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Soomaaliya: doon daroogo waday oo la baarayo
Soomaaliya: doon daroogo waday oo la baarayo
Telefishenka Sky News ee waddankaasi Australia ayaa shaaciyay in ciidamaddooda badda ay gacanta ku dhigeen dooni laga soo buuxiyay shixnad xashiish ah oo miisaankeedu yahay 5.6 tan, kaasoo ku kacaya adduun lacageed oo gaadhaya qiyaastii 280 malyuun oo dollar.
Saraakiisha ciidamaddaasi waxay sheegeen in doonta ay qabteen, xilli ay maraysay meel 260 km oo keliya ka baxsan badda Soomaaliya, kaddibna baaritaan qaatay muddo shan maalmood ah ay ku ogaadeen in qeybo ka mid ah doontaasi lagu soo dhex qariyay jawaanno ay ka buuxaan maandooriyaha khatarta badan leh ee xashiishada.
Hawlgalkaasi waxaa si waddajir ah u fuliyay taliska ciidamadda badda Australian iyo ciidanka cirka ee New Zealand.
Ilaa iyo imminka si rasmi ah looma oga halka ay doontu u socotay, balse ciidamadda isbaheysigu waxay weli baaritaanno dheeraad ah ku wadaan dad dul saarnaa doontaasi.
Labadaasi dal ayaa ciidamaddooda u diray Bariga dhexe iyo badweynta Hindiya si ay uga qeybqaataan sugidda ammaanka baddaha iyo ka hortaga hawlaha aan sharciga ahayn ee loo adeegsado maalgelinta waxa loogu yeero argagixisada.
Previous articleShabaab oo loo fidiyay cafis si cad u shaqeynaya
Next articleBurcad haysatay weriye ajnabi ah oo sii daayay